Indlela yokufumana i-visa eRashiya? - ALinks
I-visa yaseRashiya yimvume ngohlobo lwesitika esincanyathiselwe incwadana yokundwendwela yabahambi. Inika umnini wayo ithuba lokujoyina, aphile, kwaye ashiye iRussia ngexesha elinikiweyo. Ibandakanya iinkcukacha ezinje:
Ukungena kunye nemihla yokuhamba
Ulwazi malunga nomntu okanye iqela elithumela isimemo kuwe (umnini-visa).
Kwizicelo zevisa, ixesha lokulinda elilindelweyo lifikelela kwiintsuku zokusebenza ezi-3 -20. Kuzo zonke izicelo zeVisa zaseRussia e-UK, ukuskena ngeminwe kuyimfuneko.
Ngubani ofuna iVisa yaseRussia?
I-Russia inenkqubo engqongqo yevisa. Uninzi lwamazwe kwihlabathi liphela liza kufuna ukufumana i-visa eya eRussia, kubandakanya nokhenketho. Amanye amazwe amaninzi angena phantsi kolawulo lwe-visa-free eRashiya. Oko kuthetha ukuba amazwe athile awadingi ukufikelela ngelixa esiya eRashiya.
Jonga apha ukufumana: zizwe ezingadingi visa ukungena eRashiya.
Ngaphaya koko, iRussia yenze utyelelo lwe-visa-free ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 zokukhwela abakhweli. Zininzi izikhululo zeenqwelo moya apho ukuhamba ngaphandle kwephepha lokundwendwela kunokwenzeka. Abanikazi bezopolitiko abavela kumazwe amaninzi baxolelwe kwiimeko ezimbalwa kwiimfuno zevisa.
I-visa yabakhenkethi yimvume evumela abantu bamanye amazwe njengeendwendwe eRashiya. I-visa yokhenketho lolona khetho lufanelekileyo ukuba uyazi ngokuthe ngqo ukuba ungahlala ixesha elingakanani. Kuya kufuneka ukuba uqinisekise ngendawo yokuhlala ubusuku ngabunye bokuhlala kwakho elizweni.
Ukungena ngokukodwa Ezi zinto zisebenza kangangeentsuku ezingama-30. Kwaye zinikwa ngesicelo esikhethekileyo.
Ukungena kabini- Oku kukwasebenza kwiintsuku ezingama-30
Amaxwebhu ayimfuneko kubakhenkethi:
Ipasipoti enamaphepha amabini angenanto kwi-visa yakho kunye nezitampu zokungena / zokuphuma,
Omnye umfanekiso njengefoto
Amaxwebhu okukhuthaza ii-visa zabakhenkethi (ivawutsha yehotele kunye nesiqinisekiso sokwamkelwa kwabakhenkethi)
Masithi awuyibhukisanga ihotele kwaye ungathanda ukufaka isicelo sevawutsha yabakhenkethi kunye nesiqinisekiso. Unokwenza oku kwi-intanethi (khetha "Isicelo seRistististist Invitation Only"). Ivawutsha yabakhenkethi kunye nesiqinisekiso sokwamkelwa akunakubonisa idilesi yabucala.
Abahambi abatyelela iRussia kumashishini asemthethweni okanye abucala banikwa i-visa yeshishini. Iivisa zeshishini lolona khetho lufanelekileyo kubakhenkethi abangazazi ngqo iindlela zabo. Kwaye ndifuna ukuhlala ixesha elide eRussia, okanye abafuna ukufikelela eRashiya amatyeli aliqela.
I-Russian Federation ingakhupha ii-visa zeshishini ukuya kuthi ga kumangenelo amabini ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90. Kukho ii-visa zeshishini zokungena kwiindawo ezininzi (i-Visa yeShishini yeRussia eyahlukeneyo). Isebenza iinyanga ezi-6 okanye ezili-12 ngokungeniswa / ukuphuma. Inkampani ekumemileyo inokucwangcisa ulwandiso lwevisa kwishishini.
Amaxwebhu ayimfuneko kwiVisa yoShishino:
Umfanekiso omnye ofana nefoto
Ileta eyithunyelwe ngumphathi wakho
Isimemo soMphathiswa Wezangaphakathi (sinokukunceda oko)
Iindidi zeVisa yeshishini:
Unokwenza njalo kwi-Intanethi ngoku ukuba ufuna ukufaka isicelo seSimemo seShishini (telex). Siza kuwalungisa amaxwebhu emva kokuba sifumene intlawulo yakho kwaye siyithumele kuwe ngeposi, ifeksi okanye nge-imeyile.
Xa ufaka isicelo se-visa eqhelekileyo (yeentsuku ezingama-30) yamashishini amaninzi. Nceda uqinisekise ukuba unakho ukuhambisa ipasipoti yakho yeentsuku ezingama-20 zokusebenza kwi-Embassy.
IVisa yaseRussia yoMsebenzi-
I-visa yokusebenza lolona hlobo lunzima kwaye luxabisa i-visa yaseRussia kubantu bamanye amazwe. Zimbini iintlobo zeevisa zokundwendwela:
IVisa isebenza ngeentsuku ezingama-90. Kwaye ngokusekwe kwisimemo seVisa yokuSebenza (eyalelwa ngokusekwe kwimvume yokusebenza) yi-Russian Consulate.
I-visa yokungena emininzi:
Iphinde yakhutshwa kwakhona i-visa yokungena kwi-ofisi yasekuhlaleni yamaPolisa aseMelika. Kungenxa yexesha lemvume yokusebenza (engekho ngaphezulu konyaka omnye).
Ngo-2010 Ukuqala, kukho indlela entsha yeVisa yokuSebenza. Leyo yeengcali ezineZakhono ezinezibonelelo (umzekelo, isebenza iminyaka emithathu). Kodwa eRashiya, umvuzo wengcali onjalo kufuneka ube ngaphezulu kweerandi ezizigidi ezimbini ngonyaka.
Ixesha kunye neendleko zomsebenzi viCostIxesha kunye neendleko zenkquboIi-visa zasemsebenzini zixhomekeka kwizinto ezininzi:
Umsebenzi wakho kunye nohlobo lomsebenzi onqwenela ukuwenza eRashiya.
Ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokuMenywa kwaNgokufika
Amaxabiso kunye nomgangatho weenkonzo ezinikezelwe kumncedisi wevisa
I-visa yokusebenza ihlala ihlala ikhutshwe kwiintsuku ezili-100 ngexabiso eliphakathi ezingama-80,000.
Akunyanzelekanga ukuba ushiye ilizwe wandise i-visa yomsebenzi okanye ufumane i-visa entsha yokungena. Inga unikezwe kwi-ofisi yamapolisa okuFuduka ekuhlaleni xa kusenziwa iphepha-mvume lokusebenza elisebenza ixesha elitsha.
Ukuba ufuna ukwenza izifundo zakho zaseRussia, uyakufuna i-visa yoko. Inkqubo yesicelo seVisa yokufunda yaseRussia ineenkqubo ezithile. Oku kulandelayo yinkqubo yokufaka isicelo seVisa yaseRussia:
Fumana isimemo seVisa yabafundi eRashiya (iNkxaso yeVisa). Unokufumana isimemo kwi-visa yokufunda kwi-Russian Ministry yangaphakathi. Unokuyifumana kwi-Russian Foreign Ministry okanye kwiYunivesithi yaseRussia.
Gcwalisa ifom yesicelo kwi-intanethi visa yaseRussia. Fumana isicelo se-visa kwi-intanethi ku-kdmid.ru. Le yiwebhusayithi esemthethweni yeRussia yamanye amazwe. Phendula imibuzo efunekayo ephawulwe ngo "*."
Qokelela amaxwebhu afunekayo ukufumana i-visa yomfundi waseRussia. Apha ngezantsi kukho uluhlu lwamaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo seVisa yabafundi eRashiya.
Nika isicelo sakho kuthi buqu. Thumela kwiziko lokuqhutywa kwe-visa laseRussia / kwi-Russian Consulate.
Bhatala imali yokundwendwela iRussia.
Ungalinda impendulo kwisicelo sakho emva kweenkqubo ezithile. Kuya kufuneka ufumane isimemo kudliwanondlebe lwe-visa ukuba uMzi woZakuzo ufumanisa ukuba kunyanzelekile. Nokuba baya kukucela ukuba ucele amanye amaphepha.
Oku kusebenza iinyanga ezintathu.
Isekwe kwisimemo somfundi.
Isimemo kufuneka sivela kwikholeji / eyunivesithi eRashiya.
Intlawulo yevisa yaseRussia:
Abafakizicelo bevisa yokufundisisa neRussia kufuneka bahlawule umrhumo kulungiselelo lwabo lwesicelo. Iindleko zeRussia zokundwendwela zixhomekeka kwizinto ezahlukeneyo, ezi:
Inani lamangenelo alindelweyo
Ubude bexesha leholide elicwangcisiweyo.
I-Visa yaseRussia yabucala okanye iHomestay
Ipaspoti yakho yoqobo enamaphepha amabini amiselweyo angenanto.
Iikopi ezimbini zefom yesicelo seVisa esigqityiweyo kunye nesayiniweyo
INYE ifoto esayiniweyo elingana nepasipoti esandleni.
Isatifikethi selungelo le-visa (IZVESHENIYE) esivela kumbindi we-FMS eRashiya. Esi satifikethi kufuneka ifumaneke yeyakho ngumbuki zindwendwe wakho kwaye ithunyelwe kuwe ngesiqinisekiso sokuqala. Kuya kubalulekile ukuba umbuki zindwendwe wakho azi:
Igama lakho ngokupheleleyo;
Inombolo yePaspoti kunye noMhla wokuzalwa;
Umhla wokufika / wokuhamba waseRussia.
(Iindleko zokwenza isicelo se-FMS zimalunga ne-USD $ 35. Vumela ukuvunywa kwe-FMS kangangeeveki ezi-4-6).
Ngaba ndingafikelela kwiVisa yaseRussia kwi-Intanethi?
Ii-EVISas zivumela iindwendwe ezivela naphina emhlabeni ukuba zenze isicelo se-visa yazo yaseRussia kwi-intanethi.
Iikopi ezikwi-Intanethi zepaspoti
ifom yesicelo ekwi-intanethi
kunye namanye amaxwebhu afunekayo kwi-visa
Ezi ziyimfuneko Ngenisa. Kwimimandla ethile yaseRussia, ii-eVisas ziyafumaneka ngoku.
Ungasifaka njani isicelo seVisa yaseRussia kwi-Intanethi?
Ukuzalisa ifom yesicelo seVisa saseRussia kwi-intanethi linyathelo elilandelayo. Iyafumaneka kwi-visa.kdmid.ru iwebhusayithi yoMphathiswa Wezangaphandle Wezangaphandle (MID). Ifom yesicelo ibandakanya imibuzo eyahlukeneyo malunga nawe kunye nohambo lwakho.
Landela iingcebiso ezinikwe apha ngezantsi ukugcwalisa ifom yesicelo kwi-Intanethi:
Yiya kwi visa.kdmid.ru.
Khetha igama lelizwe kwimenyu ehlayo "yelizwe" apho unqwenela ukufaka isicelo sokundwendwela eRashiya.
Khetha iingcebiso zakho kunye nolwimi lwenkxaso kwimenyu yokuhla "kolwimi lwenkxaso".
Ukuqhubeka, cofa "Isicelo esitsha esipheleleyo." Ukuba unqwenela ukuqhubeka ugcwalisa isicelo, sele uqalile. Emva koko cinezela: "Vula ngaphambi kokugqitywa kwesicelo." Ukuhlela, ukubonisa, okanye ukuprinta ngaphambi kokudibana kwesicelo, cofa iqhosha elifanayo.
Gcina inombolo yefom yesicelo, enokuthi ikwazi zibonwe kwikona ephezulu ngasekunene. Uya kuyidinga le nombolo yesicelo ukuba iseshoni yakho iyaphela. Kuyanceda ukuqhubeka nokugcwalisa usetyenziso. Sebenzisa ukhetho "lokugcina uyilo" ukugcina ikopi yokungenisa kwakho. -Iphepha linemiyalelo yesicelo elula. Lumkela ezi.
Amasimi abhalwe uphawu "*" anyanzelekile.
Phrinta ifom yesicelo sakho kwiVisa.
Beka ifoto yesayizi yepaspoti kunye neglue ngaphezulu. Ifoto akufuneki ibe ngaphezulu kweenyanga ezintandathu ubudala; umhla kwaye usayine ifom yesicelo.
Ngaba kunzima ukufumana i-visa yaseRussia?
Iivisa zaseRussia akusekho nzima ukuzenza fumana kunalo naluphi na olunye uhlobo lwevisa. Kodwa zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe njenge
ingaba unamaphepha afanelekileyo,
ingaba unerekhodi lolwaphulo-mthetho, kwaye unexesha elingakanani unakho ukufumana i-visa.
Ndifanele ndenze isicelo esingakanani sokundwendwela iRussia ngaphambi kwexesha?
Unokufaka isicelo kwiNdlu yoZakuzo yase-Russia yokufumana ivisa yabakhenkethi kungadlulanga iintsuku ezingama-90 phambi komhla wesicelo seVisa. Akucetyiswa ukuba usebenzise ngaphezulu kweenyanga ezintandathu ngaphambi kwexesha. Njengoko abanye oonozakuzaku benokuba neengxaki ngeeleta zevisa zinceda ngaphezulu kweenyanga ezintandathu.
Inkqubo yesikolo eRashiya
I-Uzbekistan ipasipoti visa amazwe asimahla
I-Visa yaseTurkey evela eCyprus